देशभित्रैबाट देश सिध्याउने खेल भइरहेको छ | नेपाल आज
Friday 20 April 2018 | शुक्रबार, ०७ बैशाख २०७५
सोमबार, १८ बैशाख २०७४ गते प्रकाशित
–डा. सुरेन्द्र केसी, राजनीतिक विश्लेषक
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि एकाएक यसरी महाभियोग लगाउनुको सीधा अर्थ देशमा भाँडभैलो निम्त्याउनु हो । भोलि(वैशाख १९) मनोनयन दर्ता गर्नु पर्ने छ । यसको दुई दिन अघि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको छ । यो कस्तो र के स्वार्थले यसो भएको हो बुझ्न गाह्रो छैन । तत्कालका लागि निर्वाचन बिथोल्ने, त्यसपछि मुलुकलाई भाँडभैलोमा जाक्ने प्रपञ्च हो यो ।
शेरबहादुरले प्रहरीको आइजिपीमा ल्याउन खोजेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न नपाएपछि त्यसको प्रतिशोध लिन प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको देखिन्छ । सुशीला कार्की आफैमा प्रधानन्यायाधीश हुनु पर्ने पात्र थिइन् कि थिइनन् त्यो बेग्लै कुरा हो । तर अहिले यो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशविरद्ध नै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु भनेको प्रायोजित नै हो ।
नेपालमा यौन दूराचारीलाई राजदूत, म्यानपावर सञ्चालकलाई राजदूत, शिक्षाका माफीयालाई सांसद बनाइन्छ । त्यस्ता माफीयाले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनु पर्छ भन्दा किन हस्ताक्षर नगरुन ।
कांग्रेस भित्रकै केही सांसदहरुले यो प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । सुजाता कोइरालाले अरु नै प्रयोजनका लागि लिइएको हस्ताक्षर दुरुपयोग भयो भनेकी छन् । तर कुन प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर लिइएको थियो खुलाएकी छैनन् । यो विषय पनि स्पष्ट हुनु पर्छ ।
सुशीला कार्कीले डिआइजी नवराज सिलवालको कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन कीर्ते थियो तर उनले कारबाही गरिनन् भन्ने आरोप महाभियोग लगाउनेले लगाएका छन् । उनीविरुद्ध महाभियोगमा एक प्रयोजनका लागि भनेर सांसदको हस्ताक्षर लिने, अर्को प्रयोजनमा दूरुपयोग गरेको भनेर सुजाताले नै मुख खोलेपछि कीर्ते गर्ने को हो त ?
सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली आएका छन् । पराजुली त न्याय क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै विवादास्पद मानिस हुन् । उनको त एसलएसीकै प्रमाणपत्र छैन भनिएको छ । यो काम चाहि कीर्ते हो कि हैन ? प्रश्न तेर्सिएका छन् ।
निर्वाचन हुँदैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । यस्तो अस्तव्यस्तता सिर्जना गरेपछि अब संसदको म्याद बढाउने, निर्वाचन नगराउने, सत्ता समिकरण फेरिरहने काम हुन्छ । हाम्रा नेता यस्तैमा रमाउछन् । यिनीहरुलाई अरु कुनै कुराको पनि मतलव छैन । आफ्नो स्वार्थ पूरा भए पुग्छ । राजनीतिलाई सघन बनाएर देशभित्रबाटै देश सिध्याउने खेल भइरहेको छ ।
जनतालाई थाहा पनि हुँदैन कतिबेला देश सकिएछ भन्ने । सिक्कीममा यस्तै भएको थियो । नेपालका लेण्डुपहरुले पनि यसै गरिरहेका छन् । कुनै बेला प्रचण्ड बाबुरामलाई भारतको दलाल भन्ने गर्थे । भारतसँग २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेपछि प्रचण्ड के रहेछन भन्ने स्पष्ट भयो । फोहोरको डंगुरको बाइ प्रोडक्ट हुन प्रचण्ड । यी प्रचण्ड जम्प मार्न खप्पिस छन् ।
संविधान जारी गर्नु अघि यिनी मधेसीसँग ३३ दलीय मोर्चामा थिए । त्यहाबाट जम्प मारेर संविधान जारी गरे । त्यसपछि जम्प पारेर केपी ओलीसँग सत्तामा टासिए । यस्ता जम्प पटक पटक गरिरहन्छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनु प्रचण्डको ‘बोल्ड डिसिजन’ भनेर उनका हनुमानहरुले उचालिरहेका छन् ।
नेपालको राजनीतिमा यस्तैको राज चल्छ । आदर्शवान र निष्ठाको राजनीति गर्नेले अवसर नै पाउँदैन । दीपक बोहोरा, कमल थापाआदिलाई हेरौं त । यिनीहरु पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म सत्ताकै वरिपरी छन् । शेरबहादुर देउवा अपराधि होइनन् । उनलाई सभापति बनाउने कांग्रेसका ती महासमिति सदस्यहरु अपराधि हुन् । नेपालमा जे पनि हुन्छ । जस्तो पनि हुन्छ । मलाई नै भोलि कुनै अपराधको जामा भिराइदिएर जेल हाले पनि अनौठो नमाने हुन्छ । (डा. केसीसँग भएको कुराकानीमा आधारित)
ओलीसँग अाज गम्भीर छलफल गर्छुः प्रचण्ड
भ्यानको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु
कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आजबाट फेरि सुरु
तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटना, सात जना घाइते
त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक उडान सुरु, अन्तर्राष्ट्रिय अझै अनिश्चित
टिम चौराह धनगढीले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै, दुबै टिमको जितमा विदेशी खेलाडीको भुमिका निर्णयक हुने
राजपा महासचिवको चेतावनीः प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन नगरे आन्दोलनमा जान्छौँ (भिडियाे)